ङादी ग्रुप पावरको नाफा बढ्दा के भयाे अरू सूचक ? :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
ङादी ग्रुप पावरको नाफा बढ्दा के भयाे अरू सूचक ?
अर्थ संसार, काठमाडौं – ङादी ग्रुप पावर कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त विवरण अनुसार तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीले ४ करोड ६९ लाख १८ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । उक्त नाफा रकम गत वर्षकाे तुलनामा १२ दशमलव ५३ प्रतिशतले बढेकाे हाे । गत आर्थिक वर्षकाे यसै अवधिमा कम्पनीले ४ करोड १६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो ।
तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीले बिजुली बेचेर १० करोड ४३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त आम्दानी गत वर्षकाे तुलनामा २ प्रतिशतले कम हाे । गत आर्थिक वर्षकाे यसै अवधिसम्ममा कम्पनीले बिजुली बेचेर १० करोड ६६ लाख ५२ हजार रूपैयाँ नाफा आम्दानी गरेको थियाे ।
त्यस्तै, कम्पनीकाे चुक्ता पूँजी ५३ करोड ५५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र जगेडा कोषमा ११ करोड १७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, प्रतिशेयर आम्दानी ११ रुपैयाँ ६८ पैसा र प्रतिशेयर नेटवर्थ १२० रुपैयाँ ८७ पैसा रहेकाे छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण यस प्रकारकाे छ :
६ शेयर बजारमा दोहोरो अंककाे गिरावट !
७ रिलायन्स लाइफको आइपिओ भर्ने कि नभर्ने ? ( कम्पनीको बिस्तृत विवरण भिडियोमा)
८ प्रभु इन्स्योरेन्सले धमाधम पठाउँदै बोनस, शेयरधनीलाई यस्तो आग्रह
९ ३० करोडकाे आइपीओ ल्याउन लागेकाे सानिमा जनरलको नाफा कति छ ?
१० बीमाकर्तामाथि एशियन लाइफको झुटको खेती, गलत तथ्याङ्क छापेरे नम्बर वानको सन्देश फैलाउँदै